थाहा खबर: ब्रिटिश एकेडेमी फिल्म अवार्डमा नेपाली फिल्म 'हल्कारा'
काठमाडौं : नेपाली फिल्म 'हल्कारा : द पोस्टम्यान' ब्रिटिश एकेडेमी फिल्म अवार्ड(बाफ्टा)को क्वालिफाइङ फेस्टिभलमा छनोट भएको छ। विक्रम सापकोटाको निर्देशनमा बनेको फिल्म बाफ्टाको कर्माथन बे फिल्म फेस्टिभलअन्तर्गत छनोट भएको हो।
महेश त्रिपाठी र विनिता थापा मगरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्ममा हुलाकीको कथा रहेको छ। यसअघि पनि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भइसकेको फिल्म मे १८ मा बेलायतमा प्रदर्शन हुनेछ। छिट्टै नेपालका हलमा पनि प्रदर्शन गर्ने तयारीमा निर्माण टोली रहेको छ।
फिल्मका अभिनेता त्रिपाठीले ह्युस्टन फिल्म फेस्टिभलमा हलकाराका लागि उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेका थिए। त्यस्तै चिन्तन राजभण्डारीले उत्कृष्ट छायांकारको रूपमा अवार्ड हात पारेका थिए। कालिपार स्टुडियो र आइसफल प्रोडक्सनको सहकार्यमा बनेको फिल्मलाई आकाश बराल, विप्लव प्रतीक र निर्देशक सापकोटाले संयुक्त रूपमा लेखेका हुन्।
पैसा बाँड्ने एमाले वडाध्यक्ष उम्मेदवार पक्राउ
नितेश र समृद्धि प्रेममा छन्?
'स्याबास् बालेन स्याबास्' सार्वजनिक
दयाहाङको नजरमा काजी कस्तो प्रेमी?
प्रदर्शनकाे तयारीमा प्रतीक्षित नेपाली फिल्म
‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ’ फिल्म बन्ने
बालेनको जितमा भियोमाको नयाँ र्‍याप सार्वजनिक
'कबड्डी ४' भारतमा पनि प्रदर्शन हुने
दयाहाङको 'कबड्डी'पछि सौगातको 'मास्टर बमकाजी' बन्ने